Harrison Painter Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Harrison Painter
Harrison iyo VP yeBusiness Development ye DK New Media. Iye ari serial muzvinabhizimusi uye wekusika mushambadzi anga aine maviri emakambani ake ekushambadzira akawana, imwe pachivande uye imwe pachena. Harrison zvakare ane ruzivo vhidhiyo uye director, achiunza iyo hunyanzvi mudanga padivi medu mamwe eprimiyamu masevhisi masevhisi. Chido chake ndechekuvaka hukama uye kutsvaga kwekudyidzana kunotarisa pasimba rekubatana, hunyanzvi, uye kukanganisa kwemusika.
Kusvika kwekunyudza Kushambadzira, Kutapa nhau, uye Dzidzo
Chitatu, Kurume 8, 2017 Harrison Painter
Yechokwadi uye yakawedzera chokwadi ichaenda kunotora rakakura basa mune rako ramangwana. TechCrunch inofungidzira kuti nharembozha AR ingangove iri $ 100 bhiriyoni musika mukati memakore mana! Izvo hazvina basa kana iwe uchishandira yekucheka-kumucheto tekinoroji kambani, kana mune yekuratidzira iri kutengesa hofisi fenicha, rako bhizinesi richabatsirwa neimwe nzira neanonyudza ekushambadzira ruzivo. Ndeupi musiyano uripo pakati peVR neAR? Virtual chaicho (VR) ndeyekuvaraidza kwedhijitari kweiyo
3 Zvikonzero zvekuwedzera Kushambadzira Kusvika neVhidhiyo
Muvhuro, Zvita 5, 2016 Svondo, Ndira 15, 2017 Harrison Painter
Vhidhiyo ndeimwe yemasimba ekushambadzira mune yako arsenal yekuwedzera kushambadzira kusvika, asi inowanzo kufuratirwa, kushandiswa zvisizvo uye / kana kusanzwisiswa. Iko hakuna mubvunzo kuti vhidhiyo yezvigadzirwa zvigadzirwa zvinotyisa. Zvishandiso zvinogona kudhura; maitiro ekugadzirisa anotora nguva, uye kuwana chivimbo pamberi pekamera hazviwanzo kuuya nyore. Nekutenda isu tine sarudzo zhinji dziripo nhasi kuti tibatsire kukunda aya matambudziko. Nharembozha nyowani dzinopa vhidhiyo ye4K, kugadzirisa